Nayakhabar.com: पटाका नपड्काउनुस है, क्यान्सर लाग्ला !
पटाका नपड्काउनुस है, क्यान्सर लाग्ला !
काठमाडौं । नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारलाई रंग र प्रकाशको पर्व मानिन्छ । यसका साथै यस पर्वमा पटाका पड्काएर रमाइलो गर्ने चलन पनि रहँदै आएको छ ।
तर तपाईंलाई थाहा छ, पटाका, भुईचम्पा लगायतका हामीले रमाइलोका लागि पड्काउने पदार्थको असरले क्यान्सरसम्मको रोग निम्त्याउँछ भनेर,